Sɛnea Wobɛbɛn Onyankopɔn | Bɛn
So wote nka sɛ wobɛn Onyankopɔn? Wɔ nnipa pii fam no, ɛte sɛ nea entumi nyɛ yiye. Ebinom suro sɛ ɔwɔ akyirikyiri dodo; afoforo te nka sɛ wɔmfata koraa. Nanso, Bible hyɛ yɛn nkuran ɔdɔ mu sɛ: ‘Yɛmmɛn Onyankopɔn, na ɔbɛbɛn yɛn.’ (Yakobo 4:8) Ɔma n’asomfo awerɛhyem mpo sɛ: “Me, [Yehowa, “NW”] wo Nyankopɔn, mikura wo nifa mu; me na mise wo sɛ: Nsuro, me ara mɛboa wo!”—Yesaia 41:13.
Yɛbɛyɛ dɛn atumi ne Onyankopɔn anya abusuabɔ a emu yɛ den saa? Adamfofa biara mu no, abusuabɔ no gyina hu a yebehu onipa no, na yɛanya ne su ahorow a ɛda nsow ho anigye ne anisɔ so. Enti Onyankopɔn su ahorow ne n’akwan a wɔada no adi wɔ Bible mu no yɛ ade a ehia sɛ yesua ho ade. Sɛ yesusuw akwan a Yehowa fa so da ne su ahorow no mu biara adi ho, na yehu sɛnea Yesu Kristo daa no adi pɛpɛɛpɛ, na yɛte sɛnea yɛn nso yebetumi anya su ahorow no bi ase a, ɛbɛma yɛabɛn Onyankopɔn. Yebehu sɛ Yehowa ne amansan Hene a ɔfata koraa. Afei nso, ɔne Agya a yɛn nyinaa hia. Ɔwɔ tumi, obu atɛntrenee, ɔyɛ onyansafo, ɔwɔ dɔ, na onnyaw ne mma anokwafo da.
Ɛmmra sɛ nhoma yi bɛtwe wo abɛn Yehowa Nyankopɔn kɛse, ma wo ne no anya abusuabɔ a ɛrensɛe da, na ama woakɔ so atra ase ayi no ayɛ daa.
Wɔn a Wɔyɛe
Bɛn Yehowa—Nnianim Asɛm